Ruushka oo fududeeyay helida qaadashada dhalashada dalkaasi iyo guurka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ruushka oo fududeeyay helida qaadashada dhalashada dalkaasi iyo guurka
Waaxda Ruushka u qaabilsan xog ururinta soo galootiga iyo dhalmada ayaa sheegay inay gudhay tirada dadka Ruushka ah oo hadda dalku lumiyay in ka badan shan boqol oo kun oo qof. Ruushka ayaa sheegay in markii ugu dambeysay ee tirada dhalashada ee dalkaasi ay korodhay ay ahayd laba sano kahor.
Waxa kale oo yaraaday dadka soo galootiga ah ee soo galaaya dalkaasi oo iyaguna gudhay. Ruushka ayaa tiradiisu taagneyd boqol lix iyo afartan dhibic 75 milyan 146.75 sanadkii 2018 halka ay hadda taagan tahay 146.24.
Qaraar uu saxiixay madaxweynaha Ruushka ayaa lagu fududeeyay helida dhalashada dadka aan u dhalan dalkaasi iyo dadka soo galootiga ah siiba dalalka Soofiyeetkii hore oo aan xadka lagu dhibeyn. Waxa kale oo la fududeeyay mudada lagu qaadan karo dhalashada dalkaasi.
Sharciga uu saxiixay ayaa waxa ku jira in ajaanibka guursada Ruush uu dhalashada ku qaadan doono muddo sadex sano halka markii hore ay ahayd shan sano ama uu iskii u qaadan karo, tani oo la mida sharciyada yaala reer galbeedka oo iyaguna sii adkenaya sharciyada guurka.
Waxay kaloo daaqada ka saareen sharci dhigaayay in qofku haysto dakhli ku filan inta u joogo Ruushka ama inta uuna soo gelin taas oo iyada lafteeda leh soo jiidasho.
Ujeedada sharcigan ayaa ah in la kordhiyo tirada Ruushka iyo in dadka wata baasaboorka Ruushka ay sahli karaan waxyaabo badan markay ku noqdaan dalalkooda sida kuwa ka taga dalalka reer galbeedka oo inta badan jaajuusin u noqda dalalkaas.